မြဝတီတွင် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် သက်တမ်းရင့် မန်ကျည်းပင်ကြီး နေအိမ် သုံးလုံးပေါ် ပြိုလဲ - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဇွန် ၁
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် မေ ၃၁ ရက် ညက မိုးများစွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သက်တမ်းရင့်မန် ကျည်းပင်ကြီးတစ်ပင်ပြိုလဲကာ လူနေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”မေ ၃၁ ရက် ည ၇ နာရီခွဲ မှာ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ဗန္ဗုလလမ်းက သက်တမ်းရင့် မန်ကျည်းပင်ကြီးလဲကျခဲ့ပြီး လူနေအိမ်သုံးလုံး ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ လူတွေတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ မရှိပါဘူး။ အခုလဲကျနေတဲ့ မန်ကျည်းပင်ကြီးကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းဆောင် ရွက်ပေးနေပါတယ်”ဟု မြို့နယ်စည် ပင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းရွှေက ပြောသည်။
မေ ၂၉ ရက်နှင့် ၃ဝ ရက်များတွင် မြဝတီမြို့၌ မိုးသည်းထန် စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် ဓိဋ္ဌာန်အောင် စေတီတော်ခြေရင်းရှိ မြေထိန်းနံရံ ပြိုကျခဲ့သည့်အပြင် မြဝတီမြို့အား ကစားကွင်းတောင်ဘက်ရှိ အုတ်တံတိုင်းကြီးလည်း ပေ ၁ဝဝ ခန့် ပြိုလဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ ”ညနေ ၆ နာရီခွဲမှာ မိုးတွေ သည်းလာသလို မန်ကျည်းပင်ကြီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့စောင်းလာတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်က မန်ကျည်းပင်နဲ့ကပ်နေတော့ အိမ်ပေါ်ကို နည်းနည်းချင်းပိလာတာပေါ့။ ဒါ နဲ့ကျွန်တော်က အိမ်ထဲက မိသားစု တွေရယ်၊ ဘေးနားက အိမ်တွေကိုလည်း အိမ်ထဲကထွက်ကြဖို့ အော်ဟစ်ပြောတော့ အပြင်ကိုပြေးထွက်ကြတယ်။ ပြေးထွက်ကြပြီးအချိန် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ မန်ကျည်း ပင်ကြီးလဲကျသွားတော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အိမ်အပါအဝင် အိမ် သုံးလုံးပျက်စီးသွားတာပေါ့။ လူ တွေတစ်ယောက်မှ ထိခိုက်မှုမရှိ ပါဘူး”ဟု နေအိမ်ပျက်စီးခဲ့သူ ဦး ဝင်းလှိုင်က ပြောသည်။
မန်ကျည်းပင်ကြီးပြိုလဲမှု ကြောင့် ဦးခင်ဝင်း၊ ဦးဝင်းလှိုင်နှင့် ဒေါ်ပျိုတို့၏ နေအိမ်သုံးလုံးပျက် စီးခဲ့ရပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါအဝင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများက လဲကျနေ သောမန်ကျည်းပင်ကြီးကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြောင်း မန်ကျည်းပင်ကြီးလဲကျမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်း ၃ဝ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စက်လှေ လှည့်လည် ခိုးယူသူ၏ ဖော်ထုတ်ချက်အရ ကျပ်သိန်း ၂ဝဝဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ စက်လှေ ၃၈ စင်းကို သ?
မြိတ်မြို့နယ်၌ ရေချိုငါးခူ မွေးမြူသူ များပြားလာပြီး ဝယ်ယူစားသုံးသူ မရှိတော့သဖြင့် ငါးမွေး
အဖြူရောင်နယ်မြေ ရခိုင်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ခြေချရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကု?
မန္တလေးမြို့ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ”Mandalay: The Future We Want” ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ